Usa: is qurxinta qowmiyadaha ayaa ugu dambeyntii ku biirtay qaybta qurxinta - Afrikhepri Fondation
Usa: Kombuyuutarka qowmiyadeed ee ugu dambeyntii wuxuu isku xiraa waaxda qurxinta
Tisagu derbigii wuu soo socdaa, laakiin hawsheennu hadda way bilaabmaysay. Farriinta tusaysa video #BreakTheWalls Sheamoisture ayaa hadlaya. Adigoo ka soo guuraya waaxda alaabta qowmiyadeed una gudbaysa qaybta qurxinta, astaanta Mareykanka ayaa jabisa nidaam kala soocida kaasoo isu sharraxaya ilaa xadka shaambo.
Sheekada quruxda badan
Waxaa lagu aasaasay USA 1992, sheamoisture waa shirkad Mareykan ah oo ay abuurtay farcankii Sofi Tucker kaas oo, ka yimid 1912, oo ku yaal Sierra Leone, wuxuu bilaabay wax soo saar iyo qaybinta alaabta jirka iyo timaha ku saleysan shea butter iyo of saabuun madow. Waxay ka kooban yihiin walxaha ganacsiga ka ganacsada ee dabiiciga ah iyo kuwa cadaaladda ah, waxyaabaha sheamoisture-ka ah waxay ku mutaysteen guusha ay ka gaadheen alaabada kala duwan ee timaha ee loo qoondeeyay quruxda timaha, timaha leh iyo kuwa timaha leh. Hadaf cad oo afro ah. Darajooyinka ayaa si tartiib tartiib ah u koray: ragga, ilmaha, qurxinta.
Xilligaan lagu qiimeeyo 200 malaayiin doolar, shirkadu weli waxay leedahay saamiyo badan oo qoys. Alaabooyinka waxaa lagu qaybiyaa Maraykanka iyo adduunka oo dhan.
Farshaxanka iyo Jinsiyada Qowmiyadeed: Ma yihiin kuwa cunsuriyadeeriyada suuqyada?
"Maraykanka gudeheeda, waaxaha qurxinta waa meesha ugu dambaysa ee aan kala go'doonin," ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray. By qaybinta qaybta qurxinta ee quruxda iyo Qowmiyadeed, ma jiri lahayd, madaxa madaxa siriyaalka, rabitaan qoto dheer ah si quruxda jinsiyada quruxda labaad loo qiimeeyo? Oo, iyadoo la kordhinayo, dadka isticmaala macaamiisha qiimaha labaad?
Qalabka Horumarinta iyo xarumaha iibsigooda dhexe ma aha mid loo yaqaano caqli-gal ah, laakiin halkii ay noqon lahaayeen mashiino dagaal ah marka la eego sahayda iyo kordhinta marginsyada. Xaqiiqada ah Diintooda lagu qoran dukaanka ku kici qiimaha weyn in brand ku qasbay waajibaadka badan (Muga heli karo, xadad dib, xadad ka hor, de-liiska ee badeecooyinka qaarkood ...) taas oo ka dhigan tahay caqabad dhab ah in inta badan jilayaasha qurba-joogga.
Ka dibna waxaa badanaa su'aal ah tirakoobyada iibka. brand More - iyo wax soo saarka ee brand this - la xidhiidhaan calaamada, ka wanaagsan ee ay boos ee waaxda, labada horizontal (gondola, ama saddexaad xarunta of gacan ah) on toosan (height of indhaha, kor iyo hoos). Marka calaamadda qaybiyaha iyo agabka waawayn (L'Oreal maskaxda ku hay), ma jirto meel badan oo ka baxsan kuwa ka baxsan. Kuwaas ayaa markaa la isu geeyaa, meelo yar oo wanaagsan.
Xitaa haddii qofka macaamiisha ah madow ilaa kharash gareeya inay laba jeer ka badan macaamiisha cad ee la isku qurxiyo, mugga guud ee alaabta qowmiyadaha weli hoose (in ka yar macaamiisha aan daruuri iibsadaan alaabta tuntay 'qowmiyadaha').
Isku-dubarid qaybta iibka oo dheeraad ah, SheMoisture ayaa sidoo kale hubinaysa aragti weyn iyo dakhli dheeraad ah.
Laga soo bilaabo dagaalka lagama maarmaanka u ah udoodida dareenka badan.
Xaqiiqada ah in uu jiro ray ah si cad loo tilmaamay "beauty" iyo ray kale ku tilmaamay "qowmiyadaha" (kala ah isku qurxiyo qowmiyadaha waxyaabaha guud) waa bilicsanaanta soocayo aad u muujinta jirta in industry ee la isku qurxiyo iyo bulshada guud ahaan. Qiyaasta Caucasian leh timo dhaadheer, toosan oo ka reebaysa nooc kasta oo kale oo ka soo jeeda xuubka ugu muhiimsan. Nooc ka mid ah sifuduubka waxaa ku jira qayb weyn oo haweenka madow ah.
Isku-dubarid qaybta "Beauty", SheMoisture maaha kaliya inay rabto isbeddel saadka ah. SheMoisture waxay rabtaa in ay furto doodda ku saabsan sida ganacsiga quruxda u eegto habka cunsuriyada.
Si kastaba ha noqotee, mid kaliya ma dhagxin karaa dhagaxa suuqyada sare? By dint ee aayo-ka sida la isku qurxiyo qowmiyadaha ',' isku qurxiyo qowmiyadaha "," isku qurxiyo loogu tala galay dumarka midabka ', timaha textured, iwm ... shirkadaha qurxinta walaacsan sidoo kale isa soo saaray laga yaabaa in ka baxsan wareeggeedii caadiga ah. Sida (maqaarka madow dermatologist takhasus) Dr. Khadi Sy Bizet sheegay, gebi ahaanba khilaafsan this dheer "qowmiyadaha" in loola jeedaa fikirka ah "tartanka" iyo qiyaasta qiimaha ah oo uu sababay waxyeelo badan, a- ma waxaan u baahannahay inaan isku xiri karno maadooyin isku-dhafan oo isku-dhafan, is-beddelid, ka-reebis iyo xitaa cidda iska leh? Maxaad illoobi kartaa calaamadda (ama ereyga 'quruxda caalamiga ah' kaliya) oo aad ku sharaxdo suuq-geynta qowmiyadaha kala duwan, geomarketing-yada ah?
Ujeedadu maaha in la isku daro ama lagu qariyo aqoonsiyada quruxda guud (oo qof waliba u egyahay). Taas beddelkeeda, waa in aan ujeedkeena aheyn "mabaadi'da kala duwan", aqbalaan soo bixitaanka matalaad cusub oo qurux badan, oo la socota oo dardar-galinta ku muujinayaan. Fikradda ayaa ah in la helo magacan qowmiyadeed ee ka baxsan xaalada niche, helitaanka aragti ballaaran iyo daawadayaasha ballaaran. Tilmaamayaasha ku guuleysta in ay isu soo baxaan si ay u soo jiidaan kooxo badan oo macaamiisha ah si ay u jebiyaan saqafka caanka ah. Sida dhabta ah waxay SheaMoisture u samaysay.
Sida loo isticmaalo dayacaad la'aanta oo loo daayo - Eckhart Tollé (Audio)
Waxbarista macbudka - Vol 2 (PDF)
E = m6 barnaamij cilmiyaysan si loo arko (Youtube channel)
Ndate Yalla Mboj, dagaalyahankii diidanaa imaatinka deganayaasha Faransiiska 1855
Eedaynta addoonka xorta ah